အများသောက်တဲ့မိုးခါးရေ | Communist Party of Burma
ဗမာပြည်ကြီးပြောင်းလဲလာနေပြီဆိုတာ ဘာမှငြင်းကွယ်နေစရာအကြောင်းမရှိ။ အရင်ကနဲ့ မတူတော့တာအမှန်။ အသိသာဆုံးက သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်မှု၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာပါမကျန် ဒီမိုကရေစီအရသာကို တစုံတရာသော အတိုင်းအတာအထိ ခံစားနေကြရပြီဆိုနိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ဝတ်စားဆင်ယင် ဆိုချင်ကချင် ဖော်ချင်ပြချင်တာတွေလည်း ကမ်းကုန်ယမ်းကုန်နီးပါး လုပ်နိုင်ကြပါ၏။ လမ်းမကြီးအလယ်ခေါင် သေးတက် မပန်းရုံပါပဲ။
ဒီ့ထက်လွတ်လပ်တာဘာလဲ။ ပြည်တွင်းအုပ်စိုးသူလူတန်းစားရော ပြည်ပနိုင်ငံကြီးများပါ နဖားကြိုးဖြုတ် ဇက်ကုန်လွှတ်ပေးလုနီး ကြိုးပမ်းအား ထုတ်နေကြတာဘာလဲ။ “လွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေး” free trade ဖြစ်ပါတယ်။ “လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေး”ဟာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့သမားတွေ ထာဝစဉ်ကိုင်စွဲခဲ့တဲ့ အောင်လံတော်၊ တဖွဖွရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈယ်လာတဲ့ ဂါထာတော် တစာစာဟစ်အော်လာခဲ့တဲ့ ကြွေးကြော်သံကြီး၊ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စံနစ်ရဲ့ ရေသောက်မြစ်၊ ကမ္ဘာ့ပြည်သူလူထုနဲ့အစိုးရများကိုပါ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစံနစ်ရဲ့ လက်အောက်ခံ အဖြစ် ထားလာတဲ့ ခေတ်သစ်လွန်ခေတ်ရဲ့ပင်မရေစီးပါ။
ကမ္ဘာမှာ စက်မှုတော်လှန်ရေးဆိုတာ အနောက်တိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ၁၇ ရာစုခေတ် ဒီဘက်ပိုင်းသမိုင်းဟာ “လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားရေး”ဝါဒကပဲ မြစ်ဖျားခံပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အရင်းရှင်စံနစ်ရဲ့ မဏ္ဍိုင်ပါ။ စက်မှုတော်လှန်ရေးကြောင့် ကြောင်အတောင်ပံ တပ်ပေး လိုက်သလို အနောက်တိုင်းက လက်နက်နိုင်ငံကြီးများ အသီးသီး အပြိုင်အဆိုင်ပေါ်ပေါက်ထွန်းကား၊ တန်ခိုးကြီးအားထွားလာကြပြီး စင်စစ် မတော့ ၂၀ရာစု နောက်ပိုင်းကျမှ တကမ္ဘာလုံးကို သိုင်းခြုံလွှမ်းမိုးလာကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဗာစကို ဒဂါးမားVasco da Gama အာဖရိက တောင်ဘက်ဆုံး အငူစွန်းကိုပတ်ပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို လမ်းပွင့်ရွက်လွှင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခေတ်ကစလို့ နာရီမလပ် မပြတ်တမ်း လုံးပန်း ခဲ့ကြရာမှာ ရေနွေးငွေ့ အမဲဆီပင်နယန် စက်ပတ်ကြိုးခေတ်ကနေ လောင်စာဆီ အီလက်ထရွန်းနစ်ခေတ်ကတဆင့် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ နည်းပညာ တိုးတက်ထွန်းကားလာပြီး အင်တာနက်ကွန်ရက်ကြီး ဖြန့်ကြက်နိုင်လာတော့ ရေကြောမြေကြောတွေ တရကြမ်းရှုံ့သွားတာကြောင့် တကမ္ဘာလုံး သိုင်းခြုံမှု globalisation လို့ သမုတ်လာကြခြင်းပါ။
သို့ပေမဲ့ သူတို့နဂိုစရိုက်လောဘဇော မလျော့တဲ့အပြင် ရှိန်းဆာယာပိုမောက် လျှမ်းလျှမ်းတောက်ပညာခန်းတွေတက်ပြီး လူတူစက်ရုပ် ပိုးမွှား ပမာဏ စက်ရုပ်တွေနဲ့ အံ့မခန်း မျက်လှည့်စွမ်းတွေပြလို့မို့ ကမ္ဘာတဝန်း အံ့ချီးဖွယ်ရာ ငရဲပန်းကို ရွှေပန်းမှတ်ပြီး အတိမ်အနက်ခွဲခြားဆန်းဆစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင် လောက်အောင်ဘဲ တဟုန်ထိုးအရှိန်မြင့်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်းသစ် New World Order ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ အရင်းရှင်ကြီးများ စံနစ် မိုးခါးရေကို ပုလင်းသစ်သွပ် တံဆိပ်ပတ်လှလှလေးကပ်ပြီး ရောင်းလာ မေတ္တာလက်ဆောင်ပေး ဝေမျှလာတဲ့အခြေအနေပါ။
ရှေးကလိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ပြောင်ပြောင်ထင်းထင်း ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စံနစ် မဟုတ်တော့ပေမယ့် သူ့သဘာဝ အရင်းခံ ပြောင်းလဲလာသလားဆိုတော့ ကျားငစဉ်းလဲ သက်သတ်လွတ်မစားတာလို သယံဇာတကြွယ်ကြွယ် လုပ်အားခချိုချို နိုင်ငံတွေကိုမျက်စေ့ကျဆဲ ဈေးကွက်လုဆဲ စားခွက် ခုတ်ဆဲပါ။ သူတို့ ဥရောပ အမေရိကန်မှာ သူတို့ချင်းနယ်မြေလုစစ်ပွဲ ကမ္ဘာစစ်ဆိုတာ မဖြစ်တော့တာ ကြာလှပြီဆိုပေမယ့် သူတို့အကွက် သူတို့ စနက်နဲ့ ကျန်တတိယကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြင့် ဝင်တုန်းစွက်တုန်း လုတုန်းယက်တုန်း စစ်ပွဲတွေ တခြိမ်းခြိမ်းဖြစ်တုန်းပါ။ အမြောက်တင် သင်္ဘော ဒီပလိုမေစီဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးပေါ်လစီနေရာမှာ ခေတ်သစ်လွန်ခေတ်မှာတော့ ဝေဟင်က ရက်ရက်ရောရော ပြောင်တလင်းခါအောင် ဗုံးနဲ့ရှင်း တရွာလုံးတမြို့လုံး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းအောင် ဒုံးနဲ့ခွင်း ပစ်ခတ်ချေမှုန်း သတ်ဖြတ်နေတဲ့ သူတို့အဖို့မတော့ မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဟောင်း ကြီး ပြန်လည်ဆန်းသစ် ရိုက်ကူးနေကြတုန်းပါ။
သူတို့စက်ကွင်း သူတို့ဈေးကွက် မဝင်မချင်း အများသောက်တဲ့ မိုးခါးရေကို အနုနည်း အကြမ်းနည်း ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သောက်ခိုင်းနေတဲ့ ကာလကြီးပါ။ သူတို့လို အင်အားကြီးကြေးရတတ် လက်နက်နိုင်ငံအချင်းချင်းတောင် နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့ လွတ် လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့် အမြတ်အစွန်း ထုတ်ယူခွင့်များကို ဦးစားပေးနေရလို့ ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားများအကျိုး တကယ့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို လူထုဆန္ဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ပိုလို့တောင် ခက်ခဲလာနေတဲ့ ကာလပါ။ သူတို့အမြတ်အစွန်းကို လူထုအကျိုးပြုမယ့် ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်း ထိပါး လာရင် အစိုးရတွေကို တနိုင်ငံချင်း အာဏာစက်အပြင်ဘက်က ကမ်းလွန်အထူးတရားရုံးတွေမှာ တရားစွဲနိုင်ခွင့်ပေးဖို့ စာချုပ်တွေကမ္ဘာအနှံ့ ချုပ်ဆိုနေတယ်။  
ဒီတော့ အခြားနိုင်ငံကြီးငယ် အများစုကြီးလိုပဲ ဗမာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကို ဗမာပြည်သူလူထုက မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘဲ နိင်ငံစုံအရင်းရှင်ကြီးများ စိတ် တိုင်းကျ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အမြတ်ထုတ်နိုင်ဖို့ ရှေ့တန်းတင်အဓိကထား ကြိုးပမ်းနေရတဲ့ နိုင်ငံအစိုးရအသိုင်းအဝိုင်းများ ကျင်လည်နေတဲ့ ဝဲဂယက် သံသရာထဲကို ဆွဲသွင်းဖို့ တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်မှုများကို အများနည်းတူ မလွန်ဆန်သာအောင် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ချွင်းချက် မကျန်သလောက် ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းပြမြေပုံကျားကွက်ဆင်လာတဲ့အချိန်မှာ လိပ်ကန်ဥရောပအုပ်စုက ဆွဲကိုင်ရင်းစွဲ မီးစတဖက် ရေမှုတ်တဖက်ပေါ်လစီနဲ့ အကြမ်းနည်းလိုရင်လိုသလို သုံးပြီး ဖြုတ်ချနိုင်ရေး regime change အတွက် စိတ်ရှည်ရှည် စီမံစိုင်းပြင်းလာခဲ့တဲ့ နည်း ဗျူဟာကနေ ရင်ကြားစေ့ positive engagement နည်းဗျူဟာကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲ အသုံးချလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရပိုင်းနဲ့ အင်ဂျီအိုများ ဟာ ကုမ္ပဏီကြီးများနဲ့အလားတူ ပျားပန်းခတ် လှုပ်ရှားလာကြတာ မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီအနံ့အသက်ကလေး ထွက်လာတာနဲ့ ဗမာ ပြည်ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအပြင် ရုရှား ဂျပန် ကိုရီးယား အားလုံးခေါင်းမဖော်အောင် ဝိုင်းနှိုက်နေကြတဲ့ စားခွက်ကျင်းကို ဝင်ချင်လွန်းလို့ လမ်း ပေါ်တာနဲ့ အင်မတန်အရှိန်ပြင်းတဲ့ ကျည်ဖူးရထားကြီးလို မဆိုင်းနိုင်မတန့်နိုင် ဝင်ချလာကြတဲ့ ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲတော်အခါ ရောက်နေပါပြီ။ 
စီးပွားရေးမှာရွှေကြို ပွဲစားလုပ်တာ သူတို့အစိုးရများရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အစဉ်အဆက်လုပ်ငန်း တခုပါ။ ကိုလိုနီခေတ်ဦးက လန်ဒန်အခြေစိုက် ဗြိတိ သျှ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီဟာ ကာလကတ္တားမှာ ရုံးစိုက်ရုံမက အစိုးရတစင်ထောင်ခဲ့၊ စစ်တပ်ရေတပ်ထောင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းရှိခဲ့ပြီး၊ မြန်မာမင်းများကို ဝိတိုရိယဘုရင်မနဲ့ ထီးဆောင်းမင်းအချင်းချင်း တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံခွင့် မပေးခဲ့လို့ ကုမ္ပဏီ အစိုးရနဲ့သာ တောက်လျှောက် ဆက်ဆံခဲ့ရပါတယ်။ အမ်သုံးလုံး (3 Ms – Merchants, Missionaries, Military) သမိုင်းကိုမှတ်မိကြရင် ကနေ့ခေတ်မှာ နံပါတ်တစ် ကုန်သည် ဒါမပြောင်းပါ၊ နံပါတ်နှစ် သာသနာပြုတွေနေရာမှာ အင်ဂျီအိုတွေ ဝင်လာပါတယ်၊ ကယ်ဆယ်ရေး လူမှုရေး ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှု တန်းတူညီမျှရေး ကျားမတန်းတူညီမျှရေး လိင်တူလိင်ကွဲတန်းတူညီမျှရေး ဆိုတာတွေနဲ့ဝင်လာကြတယ်။ နံပါတ်သုံး စစ်တပ်က အရန်သင့် ကာကွယ်ရေး ဋ္ဌာန ချင်း “ချစ်ကြည်ရေးတံတားဖောက်” ဖို့ဆိုတာကို အစပျိုး သင်တန်းတွေပေးရင်း သူတို့ဩဇာညောင်းလာဖို့ လက်နက်ကြီးငယ်ယန္တရားတွေ ရောင်း အမြတ်ထုတ်ဖို့ ချဉ်းကပ်လာကြပါတယ်။ 
စီးပွားရေးကဏ္ဍသာမက နိုင်ငံရေး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်လာကြတယ်။ အဓိက ပန်းတိုင်ကတော့ တနိုင်ငံလုံး စစ်ပြေ ငြိမ်းရေးဆိုတာမှာလည်း စစ်မှန်တဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးထက် နိုင်ငံတကာအရင်းရှင်ကြီးများ တတိုင်းတပြည်လုံး တမိုးလုံးဖျောက်ဆိပ် လသာ တုန်းဗိုင်းငင်ဖို့ သွားရည်မသိမ်းနိုင်အောင် စီးပွားရေးစားကွက်တွေ စားကျက်တွေ မြင်လာကြလို့ပါ။  ဗမာပြည်သူလူထုကြီးကို အင်မတန် စေတ နာ မေတ္တာထားကြ သဒ္ဓါတရားတွေပွားကြလှလို့တော့ မဟုတ်ပါ။
တောနေလူထုကို လယ်ထဲယာထဲက တွင်တွင်မောင်းထုတ်နေပြီး နိုင်ငံခြားငွေရဖို့ ဧကပေါင်းထောင်သောင်းချီပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ အရင်း ရှင်ကြီးတွေ လက်ထဲထိုးအပ်၊ ဧရာမစက်ကြီးတွေနဲ့ ထွန်မှစိုက်မှ အိတ်စပို့ လုပ်နိုင်မှ ခေတ်မီ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ထူထောင်ရာကျမယ်လို့ ယုံကြည် ရင်ဖြင့် ၆၀% သော ပြည်သူလူထုကို တမင်သက်သက် ပေယျာလကန် ပြုတာပါပဲ။ ဆင်းရဲတွင်း နစ်သထက်နစ်ပြီး တောရပ်မှာ မနေနိုင် မြို့ကြီးတွေတက် အထူးစက်မှုဇုံတွေမှာ မသဒ္ဓါရေစာလုပ်ခကို မြို့နေဆင်းရဲသား လူတန်းစားနဲ့ ထမင်းလုပ်လုစားခိုင်းတာဟာ စက်မှုအရင်းရှင် ကြီးတွေအကြိုက် လစာလုပ်ခ ပေါသထက်ပေါအောင်၊ အလုပ်ကလေးရှိနေတာပဲ ထိုင်ရှိခိုးချင်နေရအောင်၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ချင်တိုင်း ဖြတ်လို့ရ အောင် အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးပေးတာလို့ပဲ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် နိုင်ငံစုံစီးပွားရေးသမားများနဲ့ မလွှဲမသွေ ကူးလူးဆက်ဆံ ရောင်းဝယ်ရမှာမှန်သည်၊ နိုင်ငံခြားငွေရဖို့ ပြည်ပထုတ်ကုန် တိုးတက် မြင့်မားရေး အခရာဆိုတာလည်း ဟုတ်သည်။ မိမိတို့ပြည်တွင်းမှာတွင်လယ်ယာချောင်းမြောင်းက စားသောက်ကုန်အထွက်တိုးရေး တောရပ် အိမ်ထောင်စုများ မိသားစုဝင်ငွေတိုးရေးကို ဦးစားပေးဇောက်ချ ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ပြည်တွင်းအနှံ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ကျယ်ပြန့် အောင်ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် အခြေခံအဆောက်အအုံ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တွင်ကျယ်ချောမွေ့လုံခြုံ မြန်ဆန်သေချာဖို့ လိုအပ်မယ့် ဆောက်လုပ် ရေးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း စက်ယန္တရားကိရိယာတွေ အစဉ်မပြတ်ထုတ်လုပ်သွားနိုင်မယ့် စက်ရုံကြီးတွေ ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ နိုင်ငံခြားငွေကို သုံးမှသာ ရေရှည်တိုင်းပြည် ကြီးပွားတိုးတက်ရေး၊ သူတပါးကိုစားစရာကအစ မှီခိုအားထားရမှု နည်းပါးရေးကိစ္စများ အထမြောက်အောင်မြင်မှာဆိုတာ သဘောမပေါက်ဘူးဆို ရင်တော့လည်း ကြွေးတင်ကျွန်ဖြစ် ဇာတ်လမ်းဟောင်းကြီးထဲမှာပဲ တဝဲလည်လည် သံသရာရှည်နေကြရဦးမှာပါ။ 
တောရပ်ကိုဥပေက္ခာပြု မြို့ကြီးတွေတအားကြီးလာပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ လူဆင်းရဲတွေရဲ့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်တွေ ပတ်ချာလည် ဝန်းရံ နေတဲ့ အလယ်မှာမှ တာဝါကြီးတွေ ရှော်ပင်မောလ်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ ဟိုတယ်ကြီးတွေ နိုင်ငံစုံယမကာနဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေ ဟီးထ လာတာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လှချည်ရဲ့လို့ မြင်နေကြရင်တော့ အများသောက်တဲ့ မိုးခါးရေ စထော်ဘယ်ရီ ဗနီလာနံ့ မွှေးမွှေး လေးနဲ့ မြိုချကြရုံပဲလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
Alfred de Zayas, the U.N.’s Independent Expert on the Promotion ofaDemocratic and Equitable International Order, is assigned the task to apply the standards of international law to proposed treat…
News – News & Events – TDM Journal (Transnational Dispute Management) – The Network for International Arbitration, Mediation and ADR, International Investment Law and Transnational Dispute Management
NGOs, States, and Donors Revisited: Still Too Close for …
Serious questions remain about the ability of NGOs to meet long-term transformative goals in their work for development and social justice. We investigate how,
U.S. Eyes Military Ties With Myanmar, Official Says …
The U.S. is formulating its next steps in Myanmar, including gradual re-engagement with the country’s military, with the aim of broadening cooperation after several …
← ကားလ်မာ့က်စ် သေနတ်ပြောင်းကို အမိန့်ပေးနိုင်မှ →